HomeDUNIDAAasiya86 ShiinahaMaglev Shiine wuxuu ku tababaraa sidii uu ulaaban lahaa 1000 Km Per saacaddii si loo bilaabo 2020
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline 0
Tareennada gaadha xawaaraha km waa la adeegsan doonaa
Maanta, halkaasoo tareennada xawaaraha dheereeya ay noqdaan kuwo baahsan, Shiinaha wuxuu sii wadaa inuu si aan kala go 'lahayn uga shaqeeyo tareennada maglev-ka kuwaas oo lagu soo bandhigi doono bilihii la soo dhaafay. Macnaha guud, tijaabooyinka ugu horeeya waxaa lagu qaban doonaa bilowga 2020.
Shiinuhu waligood waxay ahaan jireen waddan xawaare ku dheehan tahay marka loo eego gadiidka tareenka. Waqtigan xaadirka ah, wadanku wuxuu horey uyahay qaar kamid ah tareenada ugu dhaqsaha badan aduunka wuxuuna isku diyaarinayaa inuu qaado gadiidka tareenka ilaa heerka filimada khiyaamada sayniska iyadoo la adeegsanayo awoodeeda magnetic levitation magnetic.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in biraha maglev lagu rakibi doono gobollada dhexe ee Shiinaha, kuwaas oo sannadihii ugu dambeeyay diyaarinayay, laga soo bilaabo bilowga sanadka soo socda. Sida warbixinta lagu sheegay, mas'uuliyiinta ayaa hadda sameynaya daraasado suurta gal ah si ay u bilaabaan mashruuca.
Haddii wax walboo ay u socdaan sidii qorshuhu ahaa, safarka Guangzhou, Shiinaha ilaa Beijing waxaa lagu sameyn karaa xawaare u dhexeeya 600 km iyo 1.000 km saacaddii, taas oo macnaheedu yahay in tareennada xawaaraha sare ee la heli karo ay aad uga sarreeyaan kii 350 km / h. Intaa waxaa dheer, wargayska Asia Times, wuxuu intaa ku daray, in safarka 2.200-km laga soo qaado Wuhan illaa Guangzhou laga dhimi karo ilaa laba saacadood.
Tareennada Maglev, oo tamarta oo dhan ku qaadanaya barkinta hawada magnetic, waxay yareysaa kala goynta ilaa eber waxayna gaartaa xawaare aan hore suurtagal u ahayn. Xawaaraha ugu badan ee tareennada maglev ee hadda ka shaqeeya Shiinaha waa kiiloomitir 430 saacaddii. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda cusboonaysiinta, xawaarahahan ayaa la filayaa inay gaaraan 600 illaa 1.000 kiiloomitir saacaddii.
Iyadoo la tixraacayo dusha sare ee Shiinaha, waxaa suurtagal ah in la yiraahdo magaalooyinku waa kuwo aad u fog. Sidaa darteed, tareennada ku shaqeeya teknolojiyaddan ayaa masaafada u dhaxaysa magaalooyinka u horseedda wax aan micno lahayn oo ku dhawaad ​​iyaga u keenaya heer la tartami kara diyaaradaha.
Shiinuhu maaha dalka kaliya ee dunidu daneyneyso tareenka maglev, laakiin Japan waxaa horay loogu yiqiin inay ka shaqeyneyso tareennadooda maglev. Si kastaba ha noqotee, sheegashooyinka dhowaa ayaa sheegaya in Jarmalka iyo Mareykanka ay sidoo kale ka shaqeynayaan noocyadooda tababbarka maglev. (Webtekno)
Shiinaha Xawaaraha Sare ee Xawaaraha 1000 Per Hour | Tariinkan 30 / 11 / 2012 Shiinaha Xawaaraha Sare ee Xawaaraha 1000 Per Hour | Dhaqaalaha Maglev waxa uu tareenada si dhaqso ah u qaata si aad u culus oo ka socda Shiinaha sii kordhaya. Ilaa illaa 2020 lagu bartilmaameedsanayo dalka si loo kordhiyo shabakada una dedejiyo xNUMX km adduunka, gaar ahaan mid ka mid ah tiknoolajiyada kale ee ku saabsan ajendaha korontada deegaanka. Sannad kasta shirkado badan iyo kuwo ka badan waxay soo saaraan suuqyada korontada ama moodooyinka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaatooyin aan lagu xallin karin koronto ee warshadaha baabuurta. Tusaale ahaan, xadka baabuurta iyo xawaaraha. Sidaa daraadeed, wadamada soo koraya waxay u jeestaan ​​nidaam tareen oo aan wali taraafig ahayn oo si dhakhso ah u dabooli kara masaafo dheer
Shiinaha oo hirgeliyey Prototype of Maglev Tareen si loo xoojiyo 600 Qarshka Per Hour 23 / 05 / 2019 Shiinaha ayaa soo bandhigay farsamada tareenka magnetka, kaas oo u socon doona xawaaraha 600 saacaddii. Maglev waxaa loo isticmaalaa tareenada iyada oo aan la xirriirin gawaarida adoo isticmaalaya xoog xoog ah. China Television Central (CCTV), gobolka Shandong ee magaalada Qingdao ee Xinx ayaa ku socon doona xawaare saacad ah oo ka mid ah prototype ee tareenka maglevka ee ku yaala xaruntii kulanka. Mashruucan waxaa soo saaray shirkad shiineys ah oo Shiineys ah oo Shiinaha ah oo Shirkadda Shidaalka Tareenka ah (CRRC). Mr. Ding Sansan, oo ah agaasimaha shirkadda, ayaa sheegay in uu tijaabin karo tiknoolajiyada muhiimka ah ee prototype iyo qaybaha tiknoolajiyada muhiimka ah ee nidaamka tareenada xawaaraha sare leh. 'STATIC SHIELD' oo ah tiknooloji ah oo loogu talagalay hawsha injineernimada ee STAT
1000 Km saacaddiiba si aad si dhaqso ah u socoto 19 / 06 / 2012 Horumarka Shiinaha ee dhinaca gaadiidka ayaa sii wadi doona xawliga degdegga ah. Himilada cusub ee injineerada Shiinaha si ay u sameeyaan tareen u socda xawaare 1000 km saacadiiba. Shiinaha, dalka ugu badan ee adduunka ah, ayaa maalgelin weyn ka sameeynaya tareenada si looga gudbo dhibaatooyinka gaadiidka. Maadaama qadar dhuxulku uu hoos u dhacayo iyo qiimaha kor u kaca, muhiimadda tareenada korontada ayaa kordha. Iyadoo mashruuca cusub uu si wadajir ah u fuliyo Akadamiyadda Shiinaha iyo Shirkadda Shirkadda Shiinaha, fikradda gaadiidka dadweynaha ee tareenada ayaa si buuxda loo badali karaa. Sida laga soo xigtay Beijing Times, injineerada Shiinaha ayaa ka shaqeynaya tareen u socdaalayaya 1000 km saacaddii. Sidee ayuu u shaqeynayaa? Tareen ...
Tareenada cusub ee Samray ee la bilaabi doono December 17 / 10 / 2013 Tareenada cusub ee Samray ayaa la geyn doonaa December: 2010 waa nidaamka tareenka ugu horreeya ee Samsun. dabaaldega da'diisa. Nidaamka 3 wuxuu wadaa wadar ah tirade rakaabka ah ee 3 sanadkiiba. Qiimaha mashruuca waa qiyaastii 47 million euro, oo ay taageerto tram 110 iyo baska 16 oo ay maamulaan Samsun Transportation Inc. (SAMULAŞ). Sannadka Xarunta Miisaaniyadda Jamhuuriga ayaa sidaas awgeed loo qaybiyay muwaadiniinta. Qeybinta carnations, rakaabka 28 ee ku imaanaya saldhigga waxaa la siiyey caleemo-ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Degmada Samsun Magaalooyinka, Sefer Arli. WAXYAABAHA KUSAABSIGA KA HORREEYAY 3 47 Milyan sannadkii
Garoonka Diyaaradaha ee Gaziantep waxaa lagu bilaabi doonaa 2020 30 / 12 / 2018 Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo booqday Gaziantep oo booqasho iyo xiriirro isdaba jooga ah, ayaa eegay shaqooyinka socda ee la xiriira ballaarinta Madaarka Garoomada ee Gaziantep iyo dhisidda dhismaha cusub ee dhismaha, waxayna heleen macluumaad ka yimid maamulka. Turhan ayaa warbixin u gudbiyay xubnaha saxaafadda ka dib baadhitaankii, dhismaha cusub ee gawaarida cusub ee Gaziantep Airport ayaa la furi doonaa sannadka 2020 wuxuu yiri: "Gaziantep waa hawsha muhiimka ah ee gaadiidka hawada ee garoonka diyaaradeena waxay sii ballaarinaysaa terminaalkayaga. 6 waxaa ku jira nidaam cusub oo leh saanado dheeraad ah.
Shiinaha Xawaaraha Sare ee Xawaaraha 1000 Per Hour | Tariinkan
Shiinaha oo hirgeliyey Prototype of Maglev Tareen si loo xoojiyo 600 Qarshka Per Hour
Tareenada cusub ee Samray ee la bilaabi doono December
Isbitaallada cusub ee Izmir ayaa bilaabay adeegga (Sawir Sawir)